आजको विदेशी विनिमय मुद्रा यस्तो छ ? हेर्नुहोस् कुन देशको विनिमयदर कति ? - Gulf Sandesh
आजको विदेशी विनिमय मुद्रा यस्तो छ ? हेर्नुहोस् कुन देशको विनिमयदर कति ?
May 14, 2019 May 14, 2019 GulfSandesh0Comments
आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १२ रुपैयाँ ५६ पेसा रहेको छ भने बिक्रिदर १ सय १३ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४६ रुपैयाँ ५६ पैसा, बिक्रिदर १ सय ४७ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ९१ पैसा छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ८ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ भने मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ३ पैसा छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ। दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ९ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ६९ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ३ सय ७१ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर २ सय ९८ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ३ सय रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ।
← अब बिदेस जाने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने ।
आजको राशिफल २०७६ साल जेठ ०१ गते बुधवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ मेइ १५ तारिक। →
आज युएई दिर्हाम बाहेक सबै देशको मूल्य घट्यो, अन्य देशको दर यस्तो छ।
February 13, 2019 GulfSandesh 0
August 12, 2019 GulfSandesh 0
आज अमेरिकी डलर ,युके पाउड, कुवेती दिनारको मुल्य बढ्यो अन्य देसको विनिमय डर यस्तो छ।
February 5, 2019 GulfSandesh 0